CAJIIBKA LOOGU TALAGALAY QUUDIN NAFSADEED: FAAHFAAHIN, UJEEDO, WAX SOO SAAR (SAWIR, MUUQAAL) - INFRASTRUCTURE
Tilmaanta iyo Ujeedada
Farsamadani waxaa loogu talagalay in lagu shaqeeyo walxo cayriin ah (hadhuudh, caws, iwm.) Oo loo yaqaan "nal" xayawaan. Xaaladaha lagama maarmaanka u ah helitaanka alaabtaasi waa cadaadis sarreeya iyo heerkul sarreeya.
Adiga oo gacmahaaga, waxaad sidoo kale samayn kartaa qaxwaha cawska ah digaagga, xajmiga, iyo xitaa tareen yar-yar.
Shaqadan noocan oo kale ah ayaa calaamad u ah dhismaha oo dhan. Qaybaha ugu muhiimsan iyo kulamada waa:
shaxda (oo ah sariir), kaas oo qaban doona dhammaan qalabka;
ku wadida qaabka suunka;
furaha muhiimka ah;
Baro sida loo sameeyo quudinta digaagga iyo digaagga guriga.
Dabcan, naqshadaha warshadu waa kuwo aad u adag oo waxtar leh, laakiin milkiilaha beeraha ayaa lahaan doona ikhtiyaari guriga ah oo ku filan. Haddii ay jirto koronto koronto oo awood leh oo awood leh, ka dibna waxaad heli kartaa ilaa 40 kg oo ah isku-dar ah tayada saacaddiiba.
Markaad baraneysid waxa dheeraadka ah ee loogu talagalay iyo sida ay u caawin karto diyaarinta saldhigga quudinta, aynu eegno habka socodka laftiisa.
Inta badan farsamooyinka (warshad iyo waxsoosaarkaba labadaba) waxay ku kala duwan yihiin farsamadooda. Marka lagu daro massaajada hadhuudhka, qalabka soo socda ayaa ku haboon inuu noqdo qalab cayriin ah oo loo adeegsado:
galley iyo soy;
Cuntada iyo miro laga helo dalagyadaas;
kalluunka iyo cuntada hilibka.
Waa muhiim! Inta lagu jiro qaliinka, jirka ayaa si dhakhso ah u soo baxa. - Ka taxadar inaadan taaban.
Taasi, cutubku wuxuu "bixin karaa" wax cunto ah, taasina waa kaydka tooska ah - uma baahnid inaad iibsato bacaha asbuuc kasta oo suuqa ah, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso suufka ama soya lakabaadka kaydka la heli karo. Intaa waxaa dheer, cunnooyinkaas ayaa sahlan in lagu dhajiyo xayawaanka (oo si wanaagsan u saameeya tirooyinka miisaanka lagu helo).
Falanqaynta waxay ku bilaabataa xaqiiqda ah in alaabta ceeriin ah ee soo gashay tuubada waxaa lagu quudinayaa auger-injirta, warshadaha kululeeyaha ee jilicsan. Qaadida, soo noqoshada, waxay alaabta u wareejisaa feeraha. Waxaa jira in daaweynta kulaylka iyo cirbadeynta ugu weyn ay dhacdo.
Marxaladda ugu dambeysa waa dhexdhexaadinta qaylada, oo gacanta ku haysa gacanta (adoo bedelaya booska, waxaad samayn kartaa qiimaha jajabka ee loo baahan yahay). Qalab yar oo leh mindi oo jaraysa "sausages" oo soo-baxa waxaa la qaadayaa guga. Waxay ka soo baxaan godadka iyagoo ah qaab khafiif ah (illaa 3 cm) jiido cufan. Ogow in tani ay tahay mid caadi ah oo loogu talagalay qeybaha waaweyn, warshadaha. Dhoofinta waxsoosaarku waa mid toosan laga bilaabo dabka.
Qalabaynta loogu talagalay diyaarinta quudinta waxaa faa'iido weyn u leh xaqiiqda ah in xitaa daacad iyo dhir udgoon oo qoyan loo isticmaali karo - iyada oo daaweyn kulaylka ah, caaryadu waa "dhexdhexaadiyay".
Si aad u soo ururiso qalabka noocaas ah guriga waa suurtagal. Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan tahay qaybo ku habboon iyo xirfadaha fashiinka (inkasta oo yaqaano jaangooyuhu sidoo kale la doonayo). Aynu bilowno diyaarinta "birta".
Marka hore soo qaado mashiinka korantada. Halkan waxaad u baahan tahay 4 kiilo (1,400 rpm) - si aad ula shaqeyso korontada guriga korontada 220 V, tani waa xulashada ugu fiican. "Mashiinka awoodda yar" ma awoodi doono inuu la qabsado culeysyadaas.
Ma taqaanaa? Mabda'a dammaanadda waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa warshadaha cuntada. Qeybaha dhagaxa ah iyo macaroni ayaa sidaan loo sameeyaa.
Inta badan ujeedooyinkaas oo kale u qaado mashiinnada hore ee aan loo isticmaalin sanado, boodh ku dhejiyo geeska. Xaaladdan, cutubku waa inuu dib-u-cusbooneysiiyaa - gurigu waa la demin, xaalada raajada, dabaysha iyo keenista ayaa la hubiyaa.
Baadhista dugsiyada hoose ma dhaawici doono midkood. Imtixaanka fudud ee isbeddelka: isku day inaad wareegto rotor-ka gacanta (marka kaliya ee aan ku xirneyn mishiinka). Haddii dadaal la galo, laakiin wali tagay - dhibaato ma jirto. Taas bedelkeeda, taakuleyn adag waxay noqon kartaa natiijada ka soo kabashada ama qalabka raashinka aan habooneyn ee loo isticmaalo (ama isticmaalka aan habooneyn).
Baro sida si habboon u quudiyo dimoqraadiyada, goslings, broilers, doofaarka, boodhadhka, digaagga, daaqadaha, digaagga, bakaylaha, weylaha.
Kadib hubinta in mootadu ay xaalad fiican ku jirto, ku rid qashinka oo isku day inaad ku soo celiso. Dhageyso - hum waa in ay ahaataa xitaa, iyada oo aan la jarin "cirib". Joogitaankooda waxay muujinayaan ciyaarta ciyaaraha ama cirifka jaban.
Mashiinka la kala soocayo. Marka lagu daro "wadnaha", waxaad u baahan doontaa qaybaha soo socda:
geeska birta (25 iyo 35 mm);
mooska hoostiisa hoostiisa;
silig bira ah (dhexroor 10 mm);
barafka (8 mm);
Ku xirida lowska ku xiran wadada;
baadiyaha leh laba jiimis (63x18 dhexroor);
Waa muhiim! Rakibyada diyaarsan waa in la tirtiraa ka hor inta aan la rakibin. Si arrintan loo sameeyo, ku haboonaan rabadh lagu dhex daro gaas ama gaas.
laba sawir (riwaayad);
birta lagu galo tuubo yar yar;
(4 shaqeeya 8 mKf iyo 2 laga bilaabo 280 mKf);
fur iyo fur.
Qalabka "Mands" - Booqsiyaha xagasha, mashiinka alxanka iyo yew. Marka laga reebo iyaga, waxaa lagama maarmaan ah in lagu lug yeesho sidoo kale kaniisada.
Algorithm action bilowgii shirku wuxuu noqon doonaa sida soo socota:
Kowaad ayaa diyaarinaya qaabka. Goolasha ayaa la jarjarey si loo cabbiro, la dhigo oo karkariyo. Xaaladeena, saldhigga "sariirta" waxay leedahay qiyaastii 40x80 cm. Qeybta sare ee kiiska waa 16x40.
Kadibna lugaha ku rid shaxda (40 cm). Ku xeji saldhigga, u wareeji xidhiidhka "caarada". Soddon ee shanaad waxay hoosta ka dhigeysaa boodboodayaal.
Si aad u fuushid mishiinka waa inuu kariyaa qaab kale oo ka soo jeeda gees isku mid ah. Meelaha ay xiranyihiin waxaa la sameeyaa, sababtoo ah xiisadda suunka ayaa la hagaajin doonaa. Ugu dambeyn waa la go'aamiyaa ka dib marka labadaba shidan yihiin.
Waxaad samayn kartaa nalkaaga, ka dibna waxaad bilowdaa shaqo culus (oo ay ku jiraan isbedel). Dhibaatadu waxay inta badan ku xirantahay wax soo saarka auger:
Mid ka mid ah cidhifyada mashiinka (42 cm dheer iyo 27 mm dhexroor), 2-santimitir qaboojiye leh xaglaha 45 ° waxaa loo rogay lathe. Wuxuu ciyaaraa doorka caarada.
Ma taqaanaa? Sannadkii 1963, beer ba'an ayaa la dhigay meel u dhow Kostroma! Waxaa jiray xayawaan yar, mararna way carareen, ka dibna dadka maxalliga ahi waxay ku lug lahaayeen raadinta. Wicidii, beeraha tijaabada ah ayaa maanta shaqeeya.
Iyada oo saldhigga mashiinka, si adag u xir xayndaabka, waxay dabaysha xadhigga "toban". Tani waxay noqon doontaa nalka. Waa inay soo bandhigtaa xagasha qumman ee dhererkeedu yahay, oo si tartiib ah u jarjirta "boogaha". Haddii aan kaaliye ka helno waa mid aan macquul ahayn.
Marka ugu horeysa waxay ka timaadaa mashiinka rooga. Laga bilaabo koowaad ilaa kan labaad waa inuu noqdaa qiyaastii 25 mm (haddii lagu qiyaaso bartamaha buundada) - tani waa meesha alaabta ceeriin dhacdo. Farqiga u dhexeeya labada labaad iyo sedexaaduba waa isku mid.
Shan meelood oo dhexe ayaa la geeyaa iyadoo ay u dhaxeyso 20 mm;
At 2-2.5 cm iyaga ka, laba xargo ee silig waa si adag u "riveting" hal mar - faaruq ah ee waraabe kulul. Isku darka dusha sare, "Booqdaha" wuxuu ka dhigayaa wax yar oo yar yar oo jarjaran ah (wareega wareegga oo dhan, 1 cm korodh).
Laga soo bilaabo geeska geela, korriin la qaadi karo ayaa soo bixi doona, oo ay ku xigto saddex dheeraad ah oo leh farqiga 20 mm. Shaqadan noocan ahi waxay qaadan kartaa maalin dhan.
Iyadoo koofiyad sare sidoo kale waa in ay tinker.
U sheeg kambiyuutarrada kaliya, "isha" ma shaqeyn doonto. Si aad uga fogaato bareegta, raadi tuubada - "afartan" (waxa ay leedahay dhexroor ballaaran oo ah 48 mm). Labada dhinacba waa xargo oo xajin doona baararka. Laakiin waxaa jira wax kale oo nuuc ah. Xitaa kahor "calaamad", dhowr baarar ayaa laga yaabaa in la gooyo si loo helo daaqad lagu dhejiyo (3x2 cm), kaas oo noqon doona 3 cm mid ka mid ah geesaha.
Waa muhiim! Dusha sare ayaa loo xushay inuu yahay goob shaqo. Tilmaamaan jihe kasta waa ka hortag - kiiskan, mashiinku wuxuu noqonayaa mid aad u kulul ama "xoqin" shaqada.
Daboolka waa inuu ka baxaa dhululubada marinka - waa inay noqotaa mid ku filan in lagu rakibo mindhicirka. Wax walba waa la daboolay oo la rakibay - waad karin kartaa. U diyaargarow xaqiiqda ah in qalabka shaqada uu kululeeyo oo daadi doono, oo ma fududa inaad ka soo baxdo tuubada. Si aad hawsha u fududaysatid, tubbada ka dheerow, iyo haddii ay lagama maarmaan noqoto, ku dul niifi dusha jirka, oo aad si aad ah ugu garaacdo boobka.
Marka dhululubadu hoos u dhacdo, waa la nadiifiyaa. Ka dibna gali auger dhamaystiran. Inta u dhaxaysa derbiyada iyo nalka waa in aan ka badnaan 1 mm. Qaybta darfaha ee laf-dhabarka ayaa si buuxda u kordhin doonta. Halkaas waxaa lagu xiri doonaa dhexroorka ku haboon (halkan - "50") oo leh dherer 2 cm.
Mawduuc gaar ah - wax soo saarka fuiers. Tani waa shaqo adag oo adag. Xaqiiqdu waxay tahay in hal dhinac la dhajiyo waa in lagu dhejiyaa darbiga lafdhabarta ee mooska (waxaad u baahan doontaa inaad sameyso qariidada isku midka ah ee xarunta). Ha iloobin nalka dibadda, kaas oo qaybta oo dhan lagu dhejin doono tuulada. Laakiin xuduudaheeda:
dhererka - 80 mm;
dhexroorka "dhexda" - 49 mm;
godka gudaha - 15 mm.
Si aad u sameyso jirka mar hore ayey u fududahay - guntiga tuubada ee dhexroorka la rabay waa la gooyaa, ka dibna waxaa la gooyaa dherer ahaan. Baalalka ayaa la geliyaa gudaha, si loo xiro. Waxaa laga yaabaa in aad u baahato in aad uureysid xajmiga leh digaag. Haddii ay wax walba ku habboon yihiin, dhululubada waxaa lagu daboolayaa qaybta dambe ee kore iyo seeraha ayaa lagu bilaabay meesha gooyuhu. Dhinacyada, si tartiib ah u xiran, primotav paronit. Tube tube ku habboon 3 cm dheer ayaa la gelinayaa dusha sare ee diyaarka la diyaariyey (waxaa kale oo loo welded "meeshii").
Ma taqaanaa? Dadka waayeelka ah waxaa laga yaabaa in ay xusuustaan ​​mamnuucida haysashada lo'da ee xaafadaha, taas oo laga bilaabo 1960-kii. Milkiilayaasha qaarkood waqtigoodii waxay u baxeen seddexdaas, waxay u diraan dadka ku dhashey dhulka hoostiisa (dareenka dhabta ah ee ereyga).
Ha ilaawin isweydaarsigataasi waa inay buuxisaa mashiinka. Dambigu wuxuu u baahan yahay saxsanaanta iyo rakibidda gacmo-gacmeedka. Maskaxda ku hay in ay xoogaa dhib u geystaan ​​dayactirista, sidaas darteed, waa in "cusub" la gashado.
Waayo, beer yar ayaa noqon doona mid buuxa oo buuxa. bunker laga bilaabo birta galvanized. Waxay ku salaysan tahay laba jibbaaran (16x16 cm). Ka tirinta 14cm ee sarre ee sare, samee lebis duuban dhinaca hoose ee derbiga hore. Markaa derbiga danbe waa la rakibay, daloolana waa la sameeyaa, taas oo ay tahay in ay gasho daaqadda kiiska.
Iyada oo qaybta sare ku xiro "lugaha" ka soo gees ah 25 mm, welded at xagal. Iyaga ayaa ujoogaa labada dhinacba, godadka horay loo qoday.
Wixii khudradda ah ee raashinka loo isticmaalo qamadida, shaciir, digir, galley, masago, lupins, digir.
Qalabka ugu dambeeya waxaa la socda qalab koronto.:
Dhammaan magdhawayaasha shaqada waxaa lagu meeleeyaa hal cutub oo marxalad leh. Iyadoo bilawga sheekada la mid ah.
Ka dibna labada fiilo ee ka soo baxa shaqada ugu horeysa.
Dhabarka dhexe iyo hoose ee mootada "block", dhamaadka bilaashka ah ee fiilada waa in la xaqiijiyay. Mid ka mid ah fiilooyinka bilaashka ah ee kaamajiyuhu dusha sare ugu xiran yahay, iyo kan labaadna waxaa lagu soo bandhigaa "bilowga".
Marka ugu horeysa ee la shaqeynayo "condo" waxad ka sameysan kartaa silig ka soo wareega dabka (labaad ayaa mar hore la xidhiidhay).
Wax kastoo diyaar u ah inuu bilaabo. Bilaabidda kiciyeyaasha waxay u jeedaan laba ilbiriqsi, bilowga shaqada, haddii kale waxay qarxin karaan.
Waa muhiim! Dhamaan kartida waxay u baahan yihiin inay "xiraan" sanduuqyada alwaaxda. Dabcan, shaqada ka dib waxay daboolan yihiin si looga hortago qoyaanku inuu galo.
Xadhigga ugu dambeeya waa qalabeynta iyo "ka soo laalaadinta" shaati-baarista, taas oo ah in ay si toos ah u istaagto iyo iyada oo aan wax-is-khilaafsan midba midka kale. Haddii wax waliba ay isu yimaadaan, waxaad tijaabin kartaa oo bilaabi kartaa shaqo. Marka ugu horeysa "run" waxaa lagu sameeyaa qalabka jilicsan sida cake.
Samee ama iibsato?
Waxaan tusaale u soo qaadannay sida loo xareeyo qashin-qubaha guriga, "buuggan" wuxuu ku filnaan doonaa inuu fahmo waxa uu yahay iyo haddii ay tahay inuu qiimeeyo sameynta naftaada.
Iyada oo lagu xallinayo xalalka noocaas ah, doodaha soo socda ayaa la bixiyaa:
kartida "ku habboon" cutubka si aad ugu habboonaato baahiyahaaga adiga oo dooranaya qiyaasta ku habboon;
wareegga korantada ee korontada oo aan lahayn suuf iyo baddalo badan;
keydinta iibsashada nuujinta (koorsada ayaa ah kaydka guriga);
kakanaanta kiniisadda, oo u baahan qalab iyo xirfado;
kululaynta kululaynta, oo saameeyn ku leh dhammaan "guriga";
fiilada aan la ilaalin.
U oggolow qof kastaa inuu gaaro go'aan gaar ah, oo ku salaysan tixgelintooda. Waxaan kaliya ogaan karnaa in qofka dheeraadka ah uu noqon doono caawimo weyn oo ah xarun yar oo leh "milkiile". Laakiin beeralayda leh qiyaas balaadhan ayaa u baahan doona alaabta warshadaysan oo deggan (iyo qaali).
Hadda waxaad taqaanaa waxa dheellitiruhu u yahay faa'iido iyo sida wax soo saarku u xiran yahay. Waxaan rajeyneynaa in si sax ah loo xisaabi doono naqshadeynta, oo ururinaysa mishiinka joogtada ah. Guulaha qoysaska!